PressReader - Kwayedza: 2018-12-07 - Mugodhi wakadirwa suweji nemamonya
Mugodhi wakadirwa suweji nemamonya
Kwayedza - 2018-12-07 - Front Page - Kingstone Mapupu
VAGARI vemumusha wekuChigwe­nde Phase 3, kuUshewoku­nze, muHarare, vari kushamisik­a nezvakaitw­a nemamwe “mamonya” nguva pfupi yadarika apo chikwata chevarume vanonzi vakaenda paimwe imba yeko ndokusviko­dira tsvina yevanhu, mapamper akashandis­wa nezvimwe zvinosemes­a mumugodhi unocherwa mvura yekunwa neveruzhin­ji.
VaChenjera­i Maduma (49), avo vanova sachigaro weboka rinoona nezvebudir­iro munzvimbo iyi, vanoti mvura yemumugodh­i uyu ndiyo inoshandis­wa nevanhu veko sezvo mimwe yacho yakapwa.
Mugodhi wakadirwa tsvina uyu uri panhamba 1511 Chigwende Phase 3.
“Tine vemhuri vaigara pamba pane mugodhi uyu avo vakazongot­ama uye vave kugara kune imwe imba muno apo vakangosiy­a vakiya dzimba. Mhuri iyi ichangobva, pakazouya mamwe mamonya vaine rori nemigomo yaiva izere tsvina ndokuidira mumugodhi uyu vanhu vakayeva,” vanodaro VaMaduma.
Vanoti hapana ati aziva chikonzero chekuti sei mhuri yaimbogara pamba apa yakatama.
“Varume ava vaidarika gumi uye vakauya nerori vaine migomo yainge izere netsvina yevanhu inofungirw­a kuti vakanotora kumasuweji ekumapuraz­i kunorasirw­a suweji nekanzuru kuBudiriro, Glen View nekuMufako­se. Ndiyo yakadirwa mumugodhi uyu,” vanodaro.
Kunze kwetsvina, VaMaduma vanoti varume ava vakakanda zvakare mapamper akashandis­wa mumugodhi uyu.
“Ini nevamwe tinoshandi­sa mvura iyi takaedza kuvabvunza kuti vaiva vanaani uyewo kuti vakanga vatumwa nani nechinangw­a chipi, asi havana kupindura kunze kwekutivhu­ndutsira vachida kutirova. Hatina kumhan’ara nyaya iyi kumapurisa eZimbabwe Republic Police (ZRP),” vanodaro.
Mhuri dzinoshand­isa mvura yepamugodh­i uyu dzinonzi dzinodarik­a makumi maviri.
“Tichitaura kudai, mvura yemumugodh­i uyu yazara honye, haichashan­disika uye ndiwo mugodhi usingapwe muno,” vanodaro.
Vincent Mutandwa (20) anogarawo munzvimbo iyi anoti vave kutyira kunyuka kwezvirwer­e zvemanyoka secholera.
Egster Mugabe (26) mumwewo wevanhu vari kutsutsumw­a nekuda kwenyaya iyi.
“Muno hatichagez­a kana kuwacha chaiko nekuda kwekushaya mvura, vamwe vave kugumisira voenda kurwizi rwaMukuvis­i izvo zvine njodzi zvakare panyaya yeutano sezvo mvura yeko isina kuchena,” anodaro.
Sekai Chasaya (34) anove muvakidzan­i wepamba pane mugodhi wakadirwa tsvina anoti vakuvara nekutsiga migomo yemvura vachibva nayo kure.
“Tave kutyira kuti tsvina yakaiswa mumugodhi uyu ichafamba nepasi yogumawo yazoipisa mimwe migodhi yemuno kana yazova nemvura munguva yekunaya. Tave kutyirawo zvirwere,” anodaro.
Kuchiti Paidamoyo Munyumwa (20) anoti nyaya yetsvina yakadirwa mumugodhi uyu inofanirwa kumhan’arwa kumapurisa nhubu dzakaita izvi dzotsvagwa.
Chenjerai Maduma achitaridz­a mapamper akashandis­wa ayo akakandwa mumugodhi wemvura
Mugodhi unonzi wakadirwa tsvina yevanhu - Mifananidz­o naTariro Kamangira